अब कुन फिल्म ? - मनोरञ्जन - नेपाल
हिरो प्रदीप खड्कालाई फिल्म लिलीबिलीको रिलिजको चटारो छ । प्रेमगीत र प्रेमगीत २ पछि यही फिल्मबाट ‘हिटमा ह् याट्रिक’ गर्ने दाउमा छन् । यद्यपि, लिलीबिलीपछि उनी कुन फिल्ममा देखिन्छन् भन्ने चासो अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ । यो समयका गिनेचुनेका अभिनेता न परे ! तर, अब उनले खेल्ने फिल्मको टुंगो छैन । प्रेमगीत २ प्रदर्शनअगावै दीपेन्द्र सरकारको घोषणा गरिएको थियो । झन्डै पाँच करोड रुपियाँमा निर्माण हुने भनिएको यस फिल्ममा प्रदीप पूर्वयुवराज दीपेन्द्र शाहको भूमिकामा देखिने जानकारी गराइएको थियो । तर, घोषणा हुनेबाहेक खास केही प्रगति भएको छैन । त्यसपछि उनले सुवास गिरीको भैरवीका लागि ‘साइनिङ अमाउन्ट’ लिएका थिए । तर, गिरीको लगानीमा बनेको कृले अपेक्षाकृत व्यापार नगरेपछि भैरवी निर्माणमाथि शंका उब्जिएको छ । यीबाहेक प्रदीप अरु फिल्ममा औपचारिक रुपमा अनुबन्ध भएका छैनन् । भलै, उनलाई अफरको कमी छैन ।